INkosana isiyiNkosi yesizwe samaRharhabe | Scrolla Izindaba
INkosana isiyiNkosi yesizwe samaRharhabe
Isizwe samaRharhabe sesingenise inkathi entsha ngokufaka iNkosana uJonguxolo Vululwandle Sandile njengeNkosi entsha yesizwe.
Le ndoda eneminyaka engama-28 ubudala, isanda kungcwaba umama wayo iNkosazana yamaRharhabe uNoloyiso Sandile onqotshwe ukugula ephethwe yisifo esihlobene ne-Covid-19 kuleli sonto.
Waba yibamba leNkosi yamaRharhabe ngesikhathi kushona umyeni wakhe iNkosi Maxhob’ayakhawuleza Sandile ngonyaka wezi-2011.
INkosi uJonguxolo izohola amakhanda angama-42 emikhandlu yendabuko, abaholi bendabuko kanye nezikhulu ezithile ezingama-300 eziqhamuka ezigodini ezahlukahlukene embusweni.
Njengomshana weNkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini, iNkosana esencane inenye yezindlebe zamakhosi amakhulu aseAfrika.
Isithombe: INkosi entsha yamaRharhabe uJonguxolo Sandile nonina ongasekho iNdlovukazi uNoloyiso Sandile ekhaya labo eMngqesha-Great Place